အကောင်းဆုံး Kraft စက္ကူအလွှာများအတွက် Polyethylene အထည် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် Kraft စက္ကူအလွှာများအတွက် Polyethylene အထည် စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
ကျနော်တို့မကြာခဏအသုံးချ Kraft စက္ကူအလွှာများအတွက် Polyethylene အထည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့ပါးတဲ့ထုပ်ပိုးမှုပစ္စည်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ၎င်းမှာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုကိုပေါင်းထည့်ပြီးအစိုဓာတ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးအပြီးသတ်ဆောက်လုပ်ပေးပါတယ်။
PE ထည်များကို Kraft စက္ကူများဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက်အထည်အလိပ်နှင့်ကော်ဇောများကိုထုပ်ရန်သို့မဟုတ်ဘောဇဉ်နှင့်တိရိစ္ဆာန်အိတ်များပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
Summer Show Plastic Corporation PE အထည်ပေါ်သို့ kraft စက္ကူကိုလမိုင်းနိုင်ပြီးအိတ်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် PP နှင့် PE အထည်များကိုအဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံများတွင်အခြေပြုထားပါသည် Taiwan.
တစ် ဦး ယုံကြည်စိတ်ချရသောထောက်ပံ့ရေးသည်
အခမဲ့ဖြစ်သည် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး သည်သင်၏ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များကိုသင်နှင့်ဆွေးနွေးပြီးဆက်သွယ်လိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောမိတ်ဖက်မျှော်လင့်နေပါတယ်
PE ချည်ထည်–Kraft စက္ကူလမိုင်း
ဘုံအသုံးပြုမှု:အမျိုးမျိုးသောစက်မှုနှင့်စီးပွားဖြစ်ထုပ်ပိုး applications များ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်ထားသည့်ပိုလီမာ laminated kraft paper သည်ပြီးပြည့်စုံသောအပြီးသတ်နှင့်အတူပါ ၀ င်ပြီးထုပ်ပိုးမှုအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သည်.ကျွန်ုပ်တို့သည် PP အဆင့်ပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုများကိုလည်းပေးသည်/ထိုင်ဝမ်မှအိတ်များနှင့်ပစ္စည်းများ.အမြန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဘို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ,ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.wovensack.com.tw/my/woven-polyethylene-fabric-for-kraft-paper-laminating.html
အကောင်းဆုံး Kraft စက္ကူအလွှာများအတွက် Polyethylene အထည် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။